Archive du 20190725
Fiombonana teny Ivandry Vetivety ihany ve sa haharitra ?
Tontosa tao anatin’ny fiaraha-mientana sy ny fiombonam-po ny fitokanana ny lalana Pr Zafy Albert teny Ivandry omaly.
Manoro Régis “Tena namela mamy ho an’ny firenena ny Pr Zafy”
Nanazava fohy ny lalana nizoran’ny profesora Zafy Albert, ny profesora Manoro Regis izay mpitondra tenin’ny Ankolafy Zafy Albert sady sekretera jeneralin’ny antoko Undd.
Antenimieram-pirenena Mbola hisy fivoriana tsy ara-potoana indray
Nifarana omaly alarobia 24 jolay rehefa naharitra herinandro ny fivorian’ireo solombavambahoaka teny amin’ny Antenimieram-pirenena Tsimbazaza.
Governemanta Ny teo ihany no naverina
Tsy nisy fiovana firy ireo mpikamban’ny governemanta izay voatendry omaly takariva, fa ny teo ihany no naverina.
Hery Rakotomanana - CENI “Fanavaozana lisitra mira fanemorana datim-pifidianana”
“Tsy azo ihodivirana ny fanavaozana ny lisi-pifidianana”, hoy i Hery Rakotomanana, filohan’ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana (CENI).
Tsiry Andriamihantasoa Manahy kilalao maloto amin’ny fifidianana ben’ny tanàna
Raha ny zavatra hita hatramin’izay, hoy ny mpanao politika, Tsiry Andriamihantasoa, filohan’ny fikambanana Tanora mandray andraikitra na TMA, dia nisy kilalao maloto foana tao anaty fifidianana.
Baolina kitra – « Coupe de la Confédération de la CAF » Efa miomana fatratra ny Cnaps Sport Itasy
Na dia tsy hiatrika ny dingana savaranonandon’ny fiadiana ny amboaran’ny kaonfederasiona Afrikanina toy ny ekipan’ny Salitas (Burkina Faso), Hassania Agadir (Maroc), Djoliba (Mali),
Ligin’ny baolina kitra Amoron’i Mania Nanambara mazava fa hanohana ny kandidà Rasoamaromaka
Hisaorana, hoy Atoa Randriantsoaniaina Nirilanto “Dona” filohan’ny ligin’ny baolina kitra any Amoron’i Mania omaly tetsy Mahamasina, ny namoahan’ny “Comité de normalisation FMF”
Fanabeazana Zatovo 1 amin’ny 3 no tsy mandia varavaran-tsekoly
Tsy mandia varavaran-tsekoly ny 1 amin’ny 3 amin’ireo zatovo eo anelanelan’ny 11 hatramin’ny 14 taona eto amintsika.
Fisorohana ny fiakaran’ny rano eto Iarivo Vita ny « station de pompage » eny Andavamamba
Vita ny fanavaozana ny « station de pompage » etsy Andavamamba Anatihazo Isotry rehefa namboarina sy nokarakaraina nandritra ny 2 taona.
Andramasina Fito volana tsy nandray karama ireo mpampianatra FRAM
Fito volana tsy nandray karama koa ireo mpampianatra FRAM any amin’ny distrikan’Andramasina.
Herisetra mahazo ny olona sembana Mitaky ny hanaovana fanadihadiana ny “Autisme Madagascar”
Mangataka ny hanatanterahana fanadihadiana nasionaly momba ny trangana herisetra mahazo an’ireo olona tratran’ny fahasembanana sy ny fikorontanana ara-tsaina ny fikambanana Autisme Madagascar,
“Jeunes cadres” avy any Androy Nahatsiaro ho natao anjorom-bala hatramin’izay
Nitaraina mafy ireo tanora mivondrona ao anatin’ny jeunes cadres avy any Androy omaly alarobia 24 jolay raha nitafa tamin’ny mpanao gazety.
Fanavaozana ny tsenan’Anosibe Tsy mpivarotra ary tsy mponina ao ireo manakorontana
Nivoaka tamin’ny fahanginany omaly ny mponin’Anosibe, ny solontenan’ny mpivarotra ary ny TAM mpanao rugby izay mpiambina ny parking ao an-toerana.
Antananarivo Renivohitra Hovonoina ireo alika mirenireny
Ny fotoana mampahazo vahana ny fiovaovan’ny toetr’andro tahaka izao no tena mampirongatra ny aretina haromotana vokatry ny kaikitry ny alika na ny rangotry ny saka.
Maripana nidina ambany Ny aretin-tratra sy ny sohika no tena mahavoa ny olona
Ny aretin-tratra sy ny sohika no tena aretina mamely amin’izao vanim-potoan’ny ririnina izao.
Loza tao Mahitsy Olona efa-mianaka no voatery naiditra hopitaly
Nifanesy tato ho ato ny lozam-pifamoivoizana nitranga tany amin’iny lalam-pirenena fahefatra iny.
Haino aman-jery tsy manara-dalàna Hiroso amin’ ny fanasaziana amin’izay ny fanjakana
Zandarimariam-pirenena Mpiofana 115 napetraka ambany faneva
Notontosaina omaly alarobia 24 jolay 2019 teny amin’ny Toby Kolonely Mohajy Andriamahasolo, Fort-Duchesne (FIGN) ny lanonana fanehoana ambany faneva ireo miaramila ao amin’ny andiany 2019/1 miisa 115 izay nofanina teo anivon’ny zandarimariam-pirenena.